उड्ने बाइक बन्यो, अग्रिम बुकिङ खुला ! - Everest Dainik - News from Nepal
उड्ने बाइक बन्यो, अग्रिम बुकिङ खुला !
काठमाडौं, कार्तिक २५ । अब बाइकमा चढेर उडने दिन पनि आइसकेको छ। रसियन टेक कम्पनी ‘होभरसर्फ’ चढेर उड्ने बाइकको व्यावसायिक उत्पादन र अग्रिम बुकिङ थालेको छ।
याे पनि पढ्नुस सुदूरपश्चिमका दुइ पाङ्ग्रे सवारीको कारोबार उच्च
याे पनि पढ्नुस बाइकको नम्बर प्लेटमा यस्तो पनि देखियो
याे पनि पढ्नुस चोरीका मोटरसाइकल किन्दै प्रहरी
अमेरिकाको फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रनले हालै एउटा कानुनी अल्ट्रालाईट भेहिकलको रुपमा वर्गीकरण गर्दै यसलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । उसले यो बाइक चलाउनेलाई पाइलटको लाइसेन्स नचाहिने पनि भनेको छ । यसको उडान बेग ९६ किमीप्रति घन्टा भन्दा बढी गराउन नपाउने नियम छ । यो हरेक मुलुकका लागि उडानको कानुनी रुपमा वेग सीमा हो । यसमा चार वटा क्वाडकोपर ब्लेड जडान गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
ट्याग्स: bike, उड्ने बाइक